जनस्वास्थ्यको पाटोबाट हेर्दा, मानिसले खाने एन्टिबायोटिक कसरी खाइरहेका छन्? त्यसमा कसको पहुँच छ? राज्यले एन्टिबायोटिक प्रेस्किप्सनमा ध्यान दिएको छ कि छैन? हामी आफैँ पनि सुसूचित छौँ कि छैनौँ? भन्ने पक्षबाट हेरिनुपर्छ।